Mogadishu Journal » Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ilaa xalay kulamo la lahaa mas’uuliyiinta maamulka Jubba
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalintii shalay gaaray magaalada Kismaayo, ayaa ilaa iyo xalay kulamo kala duwan la lahaa mas’uuliyiinta maamulka Jubba, gaar ahaan hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe.
Madaxweynaha ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiinta maamulka Jubba oo uu horkacayo hogaamiyaha maamulka Axmed Madoobe ayaa siweyn loogu falanqeeyay nabadeynta deegaannada gobollada Jubbooyinka, iyo waliba hergalinta qodobadii lagu soo hishiiyay wadada hadalladii labada dhinac kol hore ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa.
Sidoo kale madaxweynaha iyo maamulka Jubba ayaa waxa ay ka wada hadleen shir la filayo dhawaan in loo qabto beelaha dega Jubbooyinka kaasoo lagu soo afjarayo maamulka KMG ah ee Jubba.
Waxaa uu sidoo kale madaxweynuhu habeenimadii xalay kulan la qaatay guddiga magaalada Kismaayo oo ay ka wada hadlleen hab ganacsiga Kismaayo uu u socdo, madaxweynaha ayaa ganacsatada u sheegay dhibaatada ka dhalankarta xaalufinta dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
Waxaa lagu wadaa madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud in uu saakay booqasho ku tago meelo kala gadisan oo magaalada ka tirsan, isaga oo sidoo kalan kulan la qaadan doona odayaasha dhaqanka gobollada Jubbooyinka.
Waxaa ugu danbeytii la filayaa in madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud uu maanta soo gabagabeeyo booqashadiisa magaalada Kismaayo.